Sida Loo Helo Qalabka Caanaha kale ee leh dib-u-habeynta IGP
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay Gaarista Qalabka ee Meelo kale oo leh dariiqa IGP Road
Hadda iyo mar kale waxaa jira baahi loo qabo in la maamulo in ka badan hal qawaaniin ku meel gaar ah oo leh wax ka badan hal meel oo isdabajoog ah: dukaamo badan, dib u dejin laga bilaabo hal nidaam ka dibna ku xiga, arrimaha kala duwan ee nidaamka keli ah, siyaasad ama shakhsiyad, curinta iyo nidaamka imtixaanka, isku-biirinta, iyo iibsashada.
Dib-u-habeynta waa habka loo marayo xogta ku-meel-gaadhka ah oo ka bilaabata hal hab-raac oo ku xigta dhinaca dambe si ay u gaarto helitaanka qalabyada ku nool goobo kala duwan. Qawaani kasta oo ka hortagaya wuxuu ku dari doonaa mid ka mid ah macluumaadka noocan ah miiska jadwalka ee gudaha meel kasta, hase yeeshee waxaa jiri kara carqalad ama u baahan tahay in lagu gaaro qalabka gadashada meel kale. Dib u-habeynta waxaa lagu sameeyaa ugu yaraan hal jadwal oo xadidan oo u dhaxeeya aaladaha ama goobaha laga soo galo meel ama meel kale oo lagu beegsado.
Waxaa jira saddex ikhtiyaar oo lagu gaarayo buuxa buuxa oo u dhaxeeya boosaska:
Gaadiidka caadiga ah ee laga bilaabo beddelka xadka. Waxaad ka gudbi kartaa koorso isdaba-joog ah oo laga bilaabo isbeddel oo taabanaya dhammaan meelaha bannaan (xaddidaadda) ee jihooyinka kuwa si gaar ah uga qayb qaata gudaha halbeegga (bedelka gudaha). Taasi waxay ka hadli doontaa waddooyinka aan mugdi ku jirin ee meel kasta oo jiheeyayaasha gudaha ah ay miyir beelaan oo ay leeyihiin jiheeyayaasha gudaha ee horey u marinta xadka, taas oo lahaan lahayd miisaan guud oo miisaan leh tan iyo markii ay ka qayb qaadan lahayd dhammaan meelaha laga baxo. Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa ugu fiican haddii ay jirto ujeeddo keliya oo xiriir la leh meelaha udhaxeeya.
Dib-u-qaybin hal-dariiq ah, oo leh hab waafaqsan. Ugu yaraan hal jadwal oo xadidan ayaa kooraska caadiga ah u gudbiya hal boos, oo haddana dib loo qaybiyo meel kale. Sida caadiga ah, waxaad ka dooran kartaa nidaamka xarunta si dib loogu qaybiyo iyo nidaamyo kale oo hela koorsada caadiga ah waxaa lagu qaadi doonaa gander ahaan qawaaniin heer sare ah. Dib-u-qaybin hal-mar ah ayaa loo adeegsadaa si kor loogu qaado wadooyinka waawayn ee waaweyn, tusaale ahaan, hay'ad caalami ah oo badan. Qaabka dhexdhexaadinta wuxuu noqon karaa BGP (Xuduudaha Gateway Protocol) iyo qawaaniinta garsoorka ahi waxay noqon karaan IGP (Internal Gateway Protocol), tusaale ahaan, OSPF, EIGRP, RIP ama IS-IS, ama xataa dhacdooyin kala duwan oo isku mid ah IGP. wuxuu u shaqeynayaa iibsasho iyo isku-dhafan, maaddaama "qaybta" cusub ee ururku aysan u baahnayn in lagu maamulo habka loo yaqaano nidaamka kala-guurka ah, ama u baahan tahay in wax laga bedelo wakhtigaas, waxa kaliya oo lagu daraa urur la leh xarunta.
Laba-dariiqo ama dib-u-qaybin la wadaago ayaa ka dhaafaysa dhowr ama badiba xogta ku socota hal qormo oo kale. Tani waa ikhtiyaarka ugu adag, gaar ahaan haddii ay jiraan wax ka badan hal ujeedo xidhiidh oo ka dhexeeya meelaha socda. Waa in la istcimaalaa marka la gaaro hadafyo ay tahay in la gaari karo oo laga bilaabo hal boos ka dibna ku xiga. Noqo sida ay tahay, qaab gaar ah waa in lagu xiraa si loo muujiyo sida dhaqdhaqaaqa uu u gaari karo yoolalkaas ama sida hawsha loo wajihi lahaa iyadoo loo eegayo istaraatiijiyadaha amniga. Dhibaatada joogtada ah ee labada qaybood loo qaybiyo waa wareegyo isdaba-joog ah, jid-is-dul-marin iyo jid-marin hoose.
Jidadka Asymmetric Meelaha loo diro waa meel aan la mid ahayn wadada safarka. Arrimaha ayaa soo bixi kara haddii ay jiraan istiraatiijiyad amniga ah oo loogu talagalay sida waxqabadka loo soo diray ama haddii ay jiraan qorshe ah diyaargarow. Dareemayaasha nabdoon ayaa sidoo kale isku buuqi kara jihada asimmareenka. Dareemayaasha xakameynaya, kuwaas oo ku habboon gawaarida qalab gaar ah marka la eego iftiinka cinwaan caadi ah, filo dirista iyo jidadka soo noqoshada si loo noqdo mid la saadaalin karo.
Jidadka Suboptimal waa meesha ugu fiican ee miiska loo diro maahan macnaheedu waa koorsada tooska ah. Tani waxay dhacdaa marka wareegtada xaddidan "dhegeyso" ku saabsan wadooyinka laga bilaabo nidaamka bilawga iyo weliba iyada oo loo marayo hab kale oo marin habaabin ah sida koorso dibadda ah. Marka laga hadlo fursadaha kala-saarista nidaamka koorasyada dibadda ay aad ugu tiirsan yihiin habka bilowga ah, isbedelku wuxuu ku tiirsan yahay koorsada dibadda ee koorsada degaanka. Degitaanka waa in la xakameeyo kala goynta ra'yiga ee wadooyinka loo gudbiyo. Tani ma aha geedi socodka tooska ah ee tooska ah waxayna ka duwan tahay marxaladda illaa heerka, xitaa gudaha gudaha ee ganacsiga sheyga ganacsiga.
Meelaha loo maro, ama taleefan loo adeegsado, waxay dhici kartaa marka xogta soo socota loo soociyo hal nidaam iyada oo ujeedadu tahay xiriirka iyo ka dib markii dib loo shaaciyey mar kale nidaamka bilowga ujeedada kale ee lala xiriirayo. Iyada oo hadaf gaar ah oo qeexan si loo xalliyo khadadka wareegga ah, waxaad u baahan tahay inaad sameysid channel-ka. Kanaalka ayaa diidi doona marinada laga bilaabo nidaamka bartilmaameedka laga rabo in la sii wado mar kale isla nidaamkaas. Waxaad u baahan tahay inaad been abuurto koorsada. Tusaale ahaan, marka aad haysato goobaha OSPF iyo EIGRP oo la xidhiidha ugu yaraan laba diiradda, waxaad dhisi doontaa hal channel dhammaan wadooyinka OSPF oo iyaga ku soocaya dib-u-soo-saarka EIGRP ilaa OSPF. Kanaalka kale waxaa loo shaqeyn doonaa dhammaan wadooyinka EIGRP, isaga oo ka soocaya dib udhigista OSPF EIGRP. Kala saaridaan waa in lagu sameeyaa dhammaan jadwallada xadidan ee u dhaxeeya labada hab oo loo adeegsan karo. Waxaad isku duwi kartaa hordhaca ama waxaad isticmaali kartaa calaamadaha, taas oo ah jahawareerkeyga. Calaamadaha ayaa la buuxin karaa qayb ka mid ah jidka loo marayo dib-u-marinta dariiqyada udub dhexaad u ah, ka dibna waxaad raadin kartaa qoraalka si aad uhesho. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso istaraatiijiyad marka ugu horreysa raadisa calaamadaha oo ay diidaan iyaga iyo fursadda ka baxsan ee aanay jirin, ka dibna waxay calaamadeeysaa waddooyinka lagu aqoonsan karo qawaaniinta ilaha. Tani waxay ku haboon tahay in la qaado, sidaa daraadeed laba siyaabood ayaa loo baahan yahay in la sameeyo. Dhammaan nidaamyada isdaba-joogga ah, oo ay ku jiraan RIPv2, waxay xoojin karaan warqadaha.
Waa inaan ka qaadnaa garsoorka IGP dib-u-habeyn loogu talagalay qalabka Cisco. Marka dib loo soo dejiyo nidaam halbeeg oo kale, waxaa jira laba waxyaalood oo dib loogu yeero:
Nidaamka dib u habeyntu wuxuu ka soo jiidanayaa miiska jadwalka, ma aha xogta qarsoodiga ah. Dhanka khadka ah ee aad dib ugu cusbooneysiineyso RIP-ga OSPF, ka dibna habraaca ayaa raadinaya dariiqyada loo yaqaan RIP ee miiska jadwalka. Waxaa jira hal kiis oo khaas ah: jidadka la xidhiidha ee habka uu ku socdo qandaraasku ku socdo.
Rikoorada Cisco ee IPv4, wadooyinka la xidhiidha ayaa si dabiici ah u cusbooneysiin doona. Tani waxay ku ansaxaysaa dhererkaada inaadan dib u cusboonaysiin marka la isku daro qandaraaska la midka ah, taas oo keeneysa in la joojiyo.
Habka Cisco ee loogu talagalay IPv6, nidaamka dib-u-habaynta dib uma cusbooneysi karo wadooyinka la xidhiidha ee uu qandaraasku socdo, haddii aadan ku darin xulashada la-xidhiidhka ee khadka dib-u-habeynta.
Qaar ka mid ah Cisco OS waxay u baahan tahay qorshe ku xiran amarka dib udajinta ee waddooyinka loo maro laga bilaabo hal nidaam kadibna ku xiga. Marka dib loo qaybiyo nidaamka, waxaad u baahan tahay inaad ku siiso jaangooyooyinka dariiqyada si ay ugu jiraan ururada saxda ah marka la eego qandaraaska la beegsanayo. Mabaadi'da hal qawaani ah ma raadineyso wax kale. Waxaa jira mitir abuur oo waa in lagu dhejiyaa dariiqyada dibedda ee udub dhexaadka ah. Jadwalka Jaantuska 1 wuxuu muujinayaa qandaraas kasta oo leh noocyo yar.
source galay RIP galay EIGRP galay OSPF galay IS-IS galay BGP (MED)
Isku xiran 1 Metric interface 20 (E2) 0 0
ma guurto ah 1 Metric interface 20 (E2) 0 0
yahan waynyahay 20 (E2) 0 Muuqaalka IGP
EIGRP waynyahay Muuqaal kale oo habraac ah 20 (E2) 0 Muuqaalka IGP
OSPF waynyahay waynyahay 0 Muuqaalka IGP
IS-IS waynyahay waynyahay 20 (E2) Muuqaalka IGP
BGP waynyahay waynyahay 1 (E2) 0
Jaantus 1: Nidaamka Iskuduwida
Marka la eego fursadda ah in mitirka abuurku uu ku socdo, koorsada lama isticmaali karo. Waxaad u baahan tahay inaad bixiso mitirka abuurka iyadoo dib loo shaacbixiyo nidaamka ilaha ujeedada bartilmaameedka ama dib-u-marinta qaddarinta ama iyada oo la adeegsanayo qiyaasta habraaca mabaadi'da oo hoos imaanaya habka isdaba marinta. Mawduucyada abuurku wuxuu ku jiraa habka ujeeddada loo leeyahay ee loo yaqaan 'RIP,' oo kharashka loogu talagalay OSPF iyo IS-IS, iyo mitirka isku dhafan ee EIGRP (awoodda wareejinta xogta, dib u dhac, tayada qalafsan, culeyska iyo MTU).
Hal feker kama dambays ah-haddii ilaha uu yahay BGP, ka dibna kaliya dibedda BGP ayaa dib loogu qaybin doonaa IGP. Tani waa nidaamka waxqabadka dabiiciga ah. Haddii ay dhacdo in aad dib u cusboonaysiiso waddooyinka BGP ee gudaha, ka dibna ku diyaari habraaca BGP (ma ahan qawaaniinta bartilmaameedka ah) bgp-dib-u-dejinta-dib-u-dejinta gudaha.
Laga soo bilaabo khadadkaas, haddii aad dhacayso in ka badan hal qawaaniin fara badan oo aad u baahan tahay gaari buuxa ama aan dhameystirnayn, waxaad u baahan doontaa inaad dib u kala qaybiso nidaamkaas. Waxaa jira dhowr arrimood oo la tixgelinayo oo diyaar u ah ka hor intaanad bilaabin diyaarinta. Dib-u-kicinta waxay noqon kartaa mid guud ahaaneed aasaas ahaaneed (hal nooc oo ah hab-raacyo, hal ujeedo xidhiidh) oo noqon kara mid aan la saadaalin Karin.
Ku Tababarka Xirfadlahaaga Tababarka Hoggaanka Gaar ahaaneed ee CISCO
Sida loo hirgeliyo barnaamijka Shabakada ee Cisco Devices